Sanibar News|Nepal's Best Online Tech ,Deal With Technology , Politics , कोरोनाको कहरका बीच देखेका सकारात्मक पाटाहरु ! राजन बिडारी – Sanibar News
कोरोनाको कहरका बीच देखेका सकारात्मक पाटाहरु ! राजन बिडारी
कोरोनाको कहरका बीच - देखेका सकारात्मक बाछिटा!रात पछि दिन अवश्य आउँछ, जीवन र जगत प्रती भरोसा राखौ ! प्रकृति अनि समय सँग कस्को के लाग्छ र ? कोभिड 19 कस्ले बनायो र कता लगेर छोड्यो भन्ने द्वन्द चलिरहँदा पनि तिनै आरोप कर्ताहरुले मात्र नभै सारा विश्व जगतले एकसाथ अपत्यारिलो एवं कहाली लाग्दो मूल्य चुकाउन परिरहेको छ ।
र पनि कालो बादलमा चादीको घेरा भने झै, समयले दिएको यो उपहार भित्र सकारात्मक पाटा पनि छन् । जस्लाई सारा बिश्वका मानवहरुले आ-आफ्नै तरिकाबाट उपयोग गरिरहेका छन् । जस्का अल्प्कालीन एवं दीर्घकालीन फाइदाहरु लिन सकिनेछ । अहिले र अब आइन्दा,
▶️घर घरमा सपरिवार एक साथ ध्यान एवं शारीरिक अभ्यास चल्दै गरेको छ । जुन पछि गएर बानीको बिकास बन्ने सके दीर्घकालीन फाइदा देखिने छ ।
▶️ घरायसी सरसफाई, आन्तरिक सजावट, सामुहिक खेल एवं मनोरञ्जन बढेका छन र त्यसको रसस्वादन पनि समुहिक रुप मै हुने भएकाले आपसी माया र आत्मीयता बढेको छ ।
▶️ पाकवान कला र बिशेष सीप एक अर्कामा आदनप्रदान भएका छन । परिवारमा एकअर्काको रुचि एवं आपसी आनीवानीहरु नजिकबाट नियाल्ने अवसर जो मिलेको छ, आफैमा गज्जवको संयोग हो । जस्का कारण आगामी दिनमा आपसी सद्भाव र आत्मीयता थप बढदै जाने बाटो खोल्नेछ ।
शरिरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन त्यसै अनुकुलको खानपान एवं घरायसी मसलाहरुको प्रयोग बढेको छ । जस्का कारण आगामी दिनमा आयुर्वेदको महत्व बढ्नेछ र ब्यक्तिहरुमा त्यसले सर्वाङ्गीण फाइदा पुर्‍याउने छ । आधुनिक मेडिसिनका दुस्प्रभावहरु घट्दै जानेछन् ।
▶️ अब सायद ब्यक्तिहरु सावधान र सचेत बन्न थाल्नेछन । र सनातन संस्कार एवं ब्यवहारहरुलाई बढावा दिनेछन् । जस्तै हात मिलाउनुको साटो नमस्कार, हात सही तरीकाले धुने बानीको विकास, घर पसिसके पछि हातमुख अनि गोडा धोइ बस्ने अभ्यास, खानामा पौष्टिक तत्वको सन्तुलन एवं समिश्रण, अनावश्य रुपमा जिस्किने छुने अस्वस्थ्य बानीबाट छुटकारा आदी ।
▶️ वरपरका कोलाहल, भागदौड अनि तनावबाट मुक्ति मिलेको छ । प्रकृति र बाताबरण खुलेको छ । शहर धेरै हद सम्म पदूषण मुक्त भएको छ ।
▶️ घर मै बसे पनि मानव जातीमा अहिले जीवन जगत अनि प्रकृतिका बारेमा भुकम्पका बेला झै घोत्लिने बुझ्ने अनि पर्गेल्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसरी मनन गर्दै जादा आगामी दिनमा सत्कर्म, सामाजिक सद्भावका साथै भाइचारा थप मजबुत हुँदै जाने देखिन्छ ।
▶️ महाशक्तिशाली राष्ट्रहरुका शक्तिशाली शासकहरु पनि सायद चेत खाएका छन । प्रकृति र समयको प्रभाव सबैले मान्नु पर्ने तत्वबोध हुन सके आगामी दिनमा यिनको गति र मति मानव कल्याण एवं भावी पुस्ताको हीतका लागि खर्चिन थाल्नेछन ।
▶️ अब सायद सम्बन्धित देशका शासक एवं प्रशासन संयन्त्रले पुर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणको महत्व र अपरिहार्यता राम्रै महशुस गर्न थाल्नेछन् । र बाँकी धेरै छन, यहाँहरुले थप्दै पुर्णता तर्फ डोर्‍याउन सक्नुहुनेछ ।
यत्तिको बिपत्तिमा पनि थोरै नै सही सकारात्मक पक्षहरु यत्रतत्र छरिएर रहेका छन । तिनलाई सगालेर आगामी जीवन, पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सद्भाव, मातृभुमिको कल्याण एवं बिश्व भाइचाराको वृद्धिमा योगदान दिउँ । आफू बाचौ र अरुलाई बाच्न सघाउँ ! हामी अहिले जुन अवस्थामा छौ - र पनि घर भित्रै खुश छौ । सबैको जयहोस । सदा जयहोस !!! राजन बिडारी अध्यक्ष जीवन्त शिक्षा, स्वयंसेवी शैक्षिक अभियान !